UTyp.io ubonisa izindululo zefonti ngokudityaniswa | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Uyifumana njani indibaniselwano yefonti efanelekileyo
Ukudibanisa imithombo emibini kwibhlog, iphepha lewebhu okanye i-ecommerce ivumela ukunika ubuhle kunye nokucaca kuzo zonke iitekisi ekufuneka zifundwe lundwendwe. Ukwazi ungayifumana njani eyona indibaniselwano yefonti kubalulekile xa kufuneka sinike umthengi uhlahlo-lwabiwo mali.
UTyp.io sisixhobo sokhetho njengomthombo wokhuthazo lokufumana indibaniselwano ezi-2 Imithombo yolwazi lomsebenzi olandelayo we-web, uyilo lwe-app okanye loo mfanekiso wokuhlamba umzimba ekufuneka usinike indawo yorhwebo kunye nentengiso eprintiweyo.
UTyp.io yiwebhusayithi esebenza kakuhle kwaye Ukuphathwa kwayo kulula kakhulu, kuba kuya kufuneka singenise ifonti ekhethwe njengesiseko sayo ukucebisa ngokudibanisa iifonti.
Kwaye nale webhusayithi uvumela ubunewunewu bokusibonisa ubuninzi obukhulu Iiwebhusayithi ezinoluhlu lweengcebiso ngokusekwe kwindibaniselwano. Eyona nto iphambili njengomthombo wokhuthazo kwaye ngenxa yoko sinokunika olona hlobo lubalulekileyo kwibhlog entsha umthengi asicele ukuba sitsale i-backlinks kwiwebhu.
Ke, le siyibonayo yimizekelo yokudityaniswa, ihlala ihleli sizazisa njengomthombo osisiseko ukucebisa ezimbalwa, lelona candelo libaluleke kakhulu kwiwebhusayithi onokuthi undwendwele kuyo esi sixhobo.
Kananjalo jonga kwinto yokuba ngaphambi kokubhala umthombo, unako Cofa kwezinye esele zifikile ngokungagqibekanga kwaye zihlala zisetyenziswa kakhulu. Montserrat, Open sans kunye nabanye abaninzi baya kubakho. Emva kokucinezela enye uya kubona kwimizekelo yokwenyani yokuba bashiyeke njani ngeefestile ezibabonisa ngokungathi ngamaphepha abo ewebhu.
Enye indawo enkulu ukuba, nangona ayisiyiyo insiza yewebhu Unjani uScoosh ukucinezela imifanekiso, ibonelela ngeenzuzo ezinkulu xa kuziwa ekutsaleni inkuthazo kwiifonti ezintsha kunye nokudibanisa kwazo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Ukuphefumlelwa » Uyifumana njani indibaniselwano yefonti efanelekileyo
Ukwenza iiqhulo ezihamba phambili kwelona ziko liphantsi lobugcisa bokuyila